Ny Taratasy Farany Ho An’izao Tontolo Izao Nosoratan’ny Siriana Iray Mpakasary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Magyar, Ελληνικά, 日本語, русский, English
Sarin'i Shamel Al-Ahmed nozaraina be tamin'ny media sosialy taorian'ny nahafatesany. Loharano: Pejy Facebook ‘Humans of Aleppo’.
“Tsy ho vita ny hilalao ny fiainan'ireo zanako roa amin'ity zava-mahafaty ity, izy ireo no hany fananako eto an-tany,” hoy i Shamel Al Ahmad, notanisain'ny pejy ‘Humans of Aleppo‘.
Siriana mpakasary fantadaza i Shamel, mpanao gazety sady mpikatroka mafàna fo izay nanapaka hevitra hijanona tao Aleppo sy hampiasa ny talentany amin'ny tolona iatrehana ny fitondràn'i Assad sy ny ISIS.
Itsy manaraka itsy ny taratasy farany nosoratan'i Shamel ho an'izao tontolo izao. Nozaraina tao amin'ny pejin'ny “Humans of Aleppo” sy hatrany anaty media sosialy marobe izy io.Maty niaraka tamin'ny vadiny ny 2 Septambra 2016 teo i Shamel. Fanafihana an'habakabaka no nahafaty azy, iray tamin'ireo fanafihana marobe nataon'ny fitondràn'i Assad sy ny governemanta Rosiana tao Aleppo.
Namela an'i Tala, zazavavy kely roa herinandro, ho kamboty izy mivady, ary ireo roa mpiray tampo aminy, roa sy dimy taona. Tsy mazava raha toa i Shamel ka efa nahafantatra ny nahaterahan'i Tala talohan'ny nahafatesany.
Shamel Al-Ahmad no anarako. 35 taona, manambady ary niteraka roa.
Niova ny fiainako teo am-pahitàna lahatsary iray ahitàna ny tafi-panjakana Siriana eo ampanaovana tsinontsinona ny vahoakako ary manitsaka an-tampon-doha azy ireo ao Bayda, Banias.
Ny Jolay 2012, niditra an'i Aleppo tanànako ireo mpiady malalaka. Lasa tsy afaka an-dohako ny hevitra hoe mety ho voasambotra na hofonjain'ny tafi-panjakàna. Tsy teo ambany fifehezan'ny fitondràna izahay, ary tsy nila intsony nanafina ny momba ahy aho.
Tapitra teo ny ahiahy sao mety hovoafonja, saingy lasa kianja malalaka ho an'ny fitondràna ilay tanànako mba hanaovany lasibatra ireo mpifanandrina aminy. Fitaovampiadiana mavesatra, fiaramanidina mpiady, baomban-tsolika ary hatramin'ny bala afomanga scud. Niainanay ireo karazana fitaovampiadiana mahafaty rehetra izay noraketiko tamin'ny fakantsariko. Noheveriko hilaza ny tantara sy hanosika ny fianakaviambe iraisampirenena mba hihetsika ireny sary ireny, na farafahakeliny hanampy ny olontsotra, saingy taoriana kely dia tsapako fa tsy misy azo antenaina izany.
Iray amin'ireo sary farany nakarin'i Shamel tao amin'ny pejiny Facebook. Nitondra ny daty 6 Aogositra 2016. Loharano. Facebook.
Naka ny ampahany maro tamin'ny fireneko ny ISIS. Avy hatrany dia fantatro fa tsy hisy farany ny adinay hisian'ny fahalalahana, ary tsy i Assad irery no olanay.
Nanjohy ny tarika “mpanome aina” aho, miasa amin'ny fampivoarana sosialy sy fampilonana azy ireo amin'ny zavamisy vaovao iainany, dia ny ady izany.
Indraindray aho no kivy sy diso fanantenana, ary indraindray very fanantenana. Nandany fotoana niaraka tamin'ny namako sy ireo rahalahiko amin'ny revolisiona aho, izay fanantenako sy loharanon'ny tanjako, handreseko ny hakiviako.
Volana maro tany aloha, nisy olona niteny tamiko mba hiondrana an-tsambo iray ho any Eoropa. Niresaka momba azy io aho, imbetsaka, ary efa saiky nanaiky mihitsy, saingy nandà nony farany…
I Siria no fireneko sy adiko. Kanefa, tsy ho vita ny hilalao ny fiainan'ireo zanako roa amin'ity zava-mahafaty ity, izy ireo no hany fananako eto an-tany.
Lasa nankany Alemaina ilay namako tamin'ny faramparan'ny 2015. Toa faly izy. Isankerinandro dia miresaka amin'ny Skype izahay ary tsy mitsahatra ny mankahery ahy izy hanaraka ny diany. Fa nitohy nandà hatrany aho.
Iray amin'ireo sary farany nakarin'i Shamel ahitàna azy sy ireo namany nankalaza ny famakiana ny fahirano nanjo an'i Aleppo. Nitondra ny daty 6 Aogositra 2016. Loharano: Facebook.
Na eo aza ny antony rehetra, izay mitombo isanandro isanandro ary manosika ahy handositra, izaho dia karazan'irony olona tsy afaka miaina lavitry ny arabeny irony. Ampahany amin'ny fiainako i Aleppo, tsy vitako ny hamela azy ho irery. Nahatsiaro nalahelo aho hoe miatrika izao zavadoza izao i Aleppo, saingy mbola afaka mifoka ny fahalalahany kosa aho.
Nalahelo ireo namana nafoiko sy mbola hafoiko aho, indrindra fa ireo izay akaiky sy rahalahy amin'ny revolisiona. Maro amin'izy ireo no very fanantenana ary tsy afaka ny hanohy. Tsy omeko tsiny ry zareo, saingy mahatsiaro malahelo aho tsy mahita azy ireny manodidina ahy.
Tsy manohitra ireo izay nanapaka hevitra ny handositra aho, na nangataka fialokalofana, satria maro tamin'izy ireny no voatery nanao izany. Fa toheriko fotsiny ny fiheverana hoe mankany mba ho afaka miaina tsara tsy miasa na manana tanjona, tsy mikatsaka ny hanompo ny tanindrazana. Tsy tiako ry zareo ho lasa vesatra ho an'ireo vondrom-piarahamonina mandray azy.
Farany, tsy mora intsony ny mijanona eto Siria, satria tsy misy intsony, na iza na iza, mahafantatra izay hiafaràn'ny tantara sarotra iainan'izy ireo, saingy mbola misy ny fanantenana hanohizana ny tolona.
Fandevenana an'i Shamel, 3 Septambra 2016. Nozarain'i Mousa Al Omar tao amin'ny Twitter.
An-jatony maro ireo olona nanatrika ny diabe ho fahatsiarovana ny fiainan'i Shamel tao Aleppo tamin'izay andro izay.
Ito i Tala, zanaka vavikelin'i Shamel.
Tala Al-Ahmad. Loharano: pejy Facebook ‘Humans of Aleppo’
Mousa Al Omar, Siriana mpanao gazety ihany koa dia nizara ho an'ireo 350.000 mahery mpanaraka azy ny saripika iray ahitàna ireo zaza roa hafa zanak'i Shamel.
Ilay maritiora mpanao gazety sady maherifo, Shamel Al Ahmad, izay vao avy namoy ny vadiny efatra andro talohan'ny nahafatesany niaraka tamin'ireo maritiora noho ny asa fampihorohoroan'ny Rosiana, namela ireo zanany ho kamboty.
Marobe ireo nahatsiaro tamin'ny fombany manokana an'i Shamel tao amin'ny aterineto. Ny sary manaraka dia nozaraina be sy mampiseho an'i Shamel teo anoloan'ny sainan'ny revolisiona.
Fanomezam-boninahitra an'i Shamel Al-Ahmad, nozaraina betsaka. Ato ny loharano. Mivaky toy izao ireo soratra
Shamel Al-Ahmad: Ny tantaran'ilay fo nofo, olom-baventy…ary revolisiona iray manontolo.
Ny Fantsona faha- 4 Britanika dia nametraka ny taratasy farany nosoratan'i Shamel ho anaty lahatsary amin'ity fanomezam-boninahitra ity:
Ny 4 Septambra 2016, nanoratra fanomezam-boninahitra iray nahavaky fo ho an'i Shamel ilay Italiana bilaogera, ‘NewsBandite’ , lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe ‘Shamel Al-Ahmed, maherifo iray tao Aleppo‘.
Izao no fanombohany:
Vao roa herinandro mahery kely monja izay no nitrangan'ity. Aty amin'ny faritra iray isan'ireo tena sahirana amin'ny ataon'ireo mpampihorohoro mpiaradia amin'i Assad sy Poutine izahay. Ao an-trano miaraka amin'ny vadiny i Shamel. Baomba iray, iray amin'ireo marobe nalatsaka tsy nisy firaharahiana, no nandrehitra ny trano. Naratra, nentina tany amin'ireo toeram-pitsaboana tsy mbola ravan'ny fitondràna izy mivady. Tsy mahatsiaro tena Ramatoa. Andro vitsy taorian'izay, niteraka ny zanany izy ary avy eo namoy ny ainy. Reraka be, ary tsy nahalàla ny fahafatesan'ilay tsy foiny, nodimandry ny Zoma 9 Septambra i Shamel. Namela ankizy telo ho kamboty izy mivady, kamboty anaty tontolom-paharavàna, ambany fatin-korontana. Tsaroana etoana ilay lehilahy ranjanana sy ny tsikin'ilay tanora matanjaka, izay im-.betsaka nanome fanantenana sy finoana ho an'ireo namany ary ny vahoaka izay mitolona ho velona ao…